Soo dejisan Sticky Password 8.2.3.24 – Vessoft
WindowsAmnigaMaamulayaasha passwordSticky Password
Qeybta: Maamulayaasha password
Bogga rasmiga ah: Sticky Password
Isticmaal Furaha Caddaanka ah – waa software si loo badbaadiyo furaha ereyada iyo macluumaadka shakhsiyeed ee keydka macluumaadka. Barnaamijka ayaa bixiya si loo abuuro ereyga furan ee loo isticmaalo si loo helo kaydinta lambarka sirta ah ee xisaabta bogagga iyo codsiyada. Lambarka Caddaanka ah wuxuu si toos ah u buuxin karaa qaababka webka ee dhererka kala duwan ee ilaha internetka. Software-ka waxay isku-duba-galisaa xogta iyada oo loo marayo server-ka gaarka ah ee cloud-ka ama user-ka Wi-Fi, iyo kaydka ereyga ee deegaanka ayaa xaqiijinaya macluumaadka shakhsiyeed marnaba ka muuqan internetka. Fure Password wuxuu leeyahay muuqaal ka mid ah qoraallada shakhsiyadeed ee taageeraya mawduucyo kala duwan si loo xafido macluumaadka ku saabsan kaarka deynta, xisaabta bangiga, liisanka darawalnimada, baasaboorka, iwm. Furaha Furaha sidoo kale waxaa ku jira generator sir ah kaas oo ka caawiya isticmaalaha isticmaalka ereyga adag ee dhererka saxda ah laga soo qaatay qaar ka mid ah jilayaasha qaarkood, sida waraaqaha caadiga ah, calaamadaha xayeysiinta iyo tirooyinka.
Autocomplete foomamka webka dheer
Ogolaansho otomaatik ah ee software iyo shabakadaha internetka
Laba aqoonsi oo aqoonsi ah
Muuqaal iyo isku-dheelitirka deegaanka
Soo dejisan Sticky Password
Faallo ku saabsan Sticky Password
Sticky Password Xirfadaha la xiriira
KeePass – maamule sirta ah iyo xog sir ah. Software-ka wuxuu adeegsadaa algorithm qaabeynta khaaska ah ee macluumaadka qarsoon.